विष्टले एक मिनेटमा ४२ वटा लसुनको पोटी खाएर, विश्व रेकर्ड ताडेको दाबी
काठमाडौं, १७ पुस । कैलाली स्थायी घर भएका भरत बिष्टले एक मिनेटमा ४२ वटा लसुनको पोटी खाएर विश्व रेकर्ड तोडेको दाबी गरेका छन् ।
आईतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले यहाँ भन्दा पहिले अमेरीकन नागरिक फ्याट्रिक ल्याटिको नाममा रहेको आधारिक किर्तिमानी आफुले तोडेको दाबी गरेका हुन् ।
उनले पहिलो प्रयासमा एक मिनेटमा ३१ वटा खाएका थिए भने पछिल्लो प्रयासमा एक मिनेटको समयमा ४२ वटा पोटा खाएका हुन्। तथापि उनले एक मिनेटमा ४२ वटा लसुनका पोटी खाएपनि गिनिजबुकले आधिकारिक रुपमा उनले खाएको भिडियो हेरेर मात्र रेकर्डलाई मान्यता दिने जनाए।
बिष्टले हात र खुट्टाको जुनसुकै औंलाले कलम समातेर उत्तिकै छिटो लेख्न सक्ने बताउँदै खाना खाँदा लसुन खाईरहने भएको कारण आफुले यो रेकर्ड तोड्ने सक्ने विश्वासका साथ यो रेकर्डको लागि आफु तयार रहेको भन्दै यो जोखिम मोलेको बताए ।
उनले अघि थपे,‘मानिसले तीन केजिसम्म लसुन खान सक्छ, त्यसैले मलाई पनि केही हुँदैन, बानि नपरेकालाई एक दुईवटा पोटाले नै घुमाउँछ, मैले कैलाली रहँदा रेडियो र स्कुलमा क्रमश ४९ र ४२ पोटा खाएको थिए, मेरो सिर्जनाले यो देशलाई चिनाउन सहयोग गर्न सक्छ भने म किन तयार नहुने ? मैले अघिबाट र पछाडिबाट उहि समयको रफ्तारमा पढ्न पनि सक्छु ।’
सपनामा ‘मन्दिर गएको’ देख्नुको खास अर्थ यस्तो हुन्छ ! (भिडिया सहित)
शाही विवाह २०१८: ह्यारी-मार्कल विवाह आज,ह्यारीको विवाहको निम्तो ट्रम्पले पाए?
मलमासका बेला श्रीमान श्रीमति किन सँगै बस्न हुदैन? याैन सम्पर्क गरे के हुन्छ? (भिडियो सहित)
हात, खुट्टा दुबै चल्दैनन्, तर यसरी स्कुटर कुदाउँछन् ब्यासकुमार (भिडियो सहित)
अश्लील सेल्फी पठाए आइफोन !
चकलेटबाट दुर्गा भवानीको मूर्ति
अविवाहित महिला राज्यका लागि भार
सुन्दरीका साथै शक्तिशाली